Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase « QEERROO
Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase
Fulbaana 13,2017 Gabaasa Qeerroo Naqamtee
Wayyaaneen lola daangaa Oromiyaa hammeessitee itti fufte. Lola kanaan qe’ee Oromoottu waaroo gaddaa galchuu cinatti ilmaan Oromoo ardaa isaanirraa gadhiisuun buqqisiisaa jirti. Abbaaf ilma haadhaaf intala, maatii addaan tamsaasuuttus jirti. Oromiyaa biyya bohichaa taatee argamti. Bohicha dabalatee ardaa ofii gadu lakkisuunis hammaataa jira. Uummata Oromoo qe’eetti uummata daangaa naqxee lolchiisuutti jirti. Naannoolee Oromiyaa daangessan mara h8dhachiisuun waraanni Oromiyaatti banameera.
Waraana kanaan qabeenyi miliyoonaan lakkahamu barbadaa’urratti argama. Haaluma kanaan Lola Liyyuu Polisiin uummata Oromiyaa Baha buqqaasuun ishee nii yaadatama. Qalbiin uummataas deggarsa uummata Oromoo kanatti saatii qabamee jiru, Wayyaanee tattaaffiuf qophii Lixa Oromiyaatti gotu jabeessite.
Weerara daangaaf uummata Gumuz tokko tokkoosaaf ,deggarsi meeshaa lolaa guutamaafii jira. Akkasuma waraanni Wallagga ona Limmuu keessatti banamee jiraachuus odeessi keenya ifa nii godha. Har’a saatiu kana konkolaataan gurguddaan patroolii 7 ol ta’an magaalaa Naqamtee buufatee jira. Konkolaataan kun meeshaa gurguddaa fe’ee jiraachuus dubbatamaa jira. Meeshaa konkolaataan kun fe’ee jiru Polisa fedaraan eegamutti jira. Amma saatii kana Magaalaa Naqamtee naannoo Rift valley balbala dhaabbataa jiru. Humni waraanaas akka malee gadi fe’amaa akka jiru beekamadga. Odeeffannoon baha jiru akka jedhutti Dafinoo irraa jalqabee Gumuz uummata naannoo Mandiif gara Daalatti irratti waraanni daangaa nii banama kan jedhudha. Uummata keenya kanaaf gama Oromoon utuu bakka sanatti waraanni itti hinbanamin akka deggarsu malu godhamuuf dhaammanna. Uummata keenya erga buqqaa’anii jireenyi isaanii hongaahee degaruurra utuu diinni cina hingahin qopheen taasifamuu qaba. Uummanni keenya sagalee ta’uufii qaba. Weerara daangaa kana akka nurraa dhaabduuf alaaf keessaa hiriira nagaa ba’uu qabna. Uummata daangaa nuuf hidhachiisuun, uummata keessaas hidhachiisuun yeroo diina ofirraa fonqolchinu akka ta’uuf Oromoon wal bira dhaabbatuu qaba.
« ONN: Oduu Idilee Oromiyaa Fuulbana 22/2017
SBO Fulbaana 24,2016. Oduu, Dhimma Kora Sabaa ABO 4ffaa irratti Ibsa WBO Zoonii Kibbaa,Cuunfaa Gabaasaa HRW dhumaatii Irreecha kan bara 2016 irratti mootummaan Wayyaanee geessise irratti Gabaasaa qindeessine Kutaa Xumuraa fi Kanneen HRW Akka ragaatti dhiheesse akkasumas Gabaasaa kana qopheessuu keessatti qooda kan qabu dargaggoo Lammii Beenyaa waliin Gaaffii fi Deebii taasifne Kutaa Jalqabaa. »
Pingback: MOTTUUMMAAN Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA